Ugu raqiisan Cuntada Colloid Mill Furimaha Furimaha Vertic ...
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Waxsoosaarka Hadhuudhka Yaryar Baastada Macaroni Samaynta Mashiinnada Kaydka Spaghetti Spaghetti Mashiinka Samaynta
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Waxsoosaarka Hadhuudhka Yar yar Baastada Macaroni Samaynta Mashiinnada Spaghetti Waxsoosaarka Khadka Wax-soo-saarka Wax-soo-saarka 1.Shirarka aasaasiga ah Sharaxa Shayga Awoodda 500kg/h Waxyaabaha Cuntada ah ee Daqiiqda Daqiiqda Corn Daqiiqda Daqiiqda Saqafka iwm Shaqaalaha ayaa u baahan 3-4 shaqaale (kuma jiraan baakad) 201s.s Kaydka taageerada waa bir kaarboon. Voltage Heerka 380V 50HZ Saddex Waji 2. Isku -darka Socodka Habka - Ku -marooji Ku -marooji - Feejiye - Goyn -Qaade - Foore Flat ...
Iibinta Tooska ah ee Warshadda oo la habeeyay Kimchi iyo Qadadka Waxsoosaarka Buuxinta ee Kimchi iyo Mashiinka Buuxinta
Iibinta Tooska ah ee Warshadda oo la habeeyay Kimchi iyo Khadka Wax -soo -saarka Buuxinta ee Kimchi iyo Mashiinka Buuxinta Shirkadda ayaa heshay shahaadada nidaamka ISO9001 iyo shahaadada CE CE. Shirkaddu waxay leedahay koox naqshadeyn xirfad leh oo ka kooban 10 qof, waxayna heshay 46 shatiyada wax soo saarka sannadka 2019, oo horseed u ah tikniyoolajiyadda qaybta suuqa. Ku hawlanaa warshadaha ku dhawaad ​​10 sano, iyagoo xal u siinaya in ka badan 3000 shirkadood gudaha iyo dibaddaba. Qiyaasta qanacsanaanta macaamilka guud waxay ka badan tahay 98%. Af ...
Mashiinka Baakadaha Miisaanka Isku -dhafan ee Tooska ah Awood -u -lahaanshaha OEM ODM La Heli Karo
Isku -dubaridka Mashiinka Baakadaha Weigher ee La -Habayn Karo ee La -habeyn karo Baaxadda dalabka: abuurka qaraha, lawska, yicib, yicib, sabiib, nacnac, pistachios, chips baradho, strips shrimp, bur saliid, kubbadaha hilibka iyo granular kale, oo kibray, qalabka iyo dhagxaanta kale, jajab wareegsan oo aan joogto ahayn miisaamidda Tirada alaabta. Astaamaha: 1. Adeegso dareemeyaal khaas ah oo aad u sarreeya oo heer sare ah. 2. Qaab xasilan oo sampling badan oo caqli badan leh, miisaan sax ah. 3. Cillad khaldan oo caqli badan ...
Khadka Wax-soo-saarka Chips-ka Batootada Si buuxda oo Toos ah Wax-ku-oolnimo Sare leh oo Mashiinnada Wax-soo-saarka Fries-ka Faransiiska ah oo La Habayn Karo
Khadka Wax-soo-saarka Chips-ka oo Si Buuxda Toos ah Wax-ku-ool ah oo La Karsado Fries Fries Fries-ka Soosaarka Farshaxanka Mashiinka samaynta kaarka baradhada ee otomaatiga ah ayaa ku habboon dhexdhexaadinta iyo ganacsiga warshad ka baaraandegidda baradhada baradho. Hawlgalka qalabku waa mid sahlan oo ku habboon, badbaadinta shaqada, 6 shaqaale ayaa ku filan. Chips -ka Baradho ee Tooska ah ee Samaynta Mashiinka Waxsoosaarka Walxaha Qulqulka leh - wiishka - diyaarinta maydhashada - qolofta - soo -goynta - goynta sli ...
Warshadda Tooska ah Iibinta Mashiinka Qiimaynta Buluugga ah ee Automatic ah
Farshaxanka Elektaroonigga ah ee Farshaxanka Farshaxanka Fruits Mashiinka Darajada PLC, sirdoon aad u sarreeya, isku -darka miisaanka, hawlgalka macquulka ah iyo tirakoobka. Lakabka ka-hortagga waxyeellada ee qalabka shaqada ee dusha ka shaqeynaya wuxuu qaataa tetrafluoroethylene si loo hubiyo hawlgalka habsami u socodka ee qalabka, buuqa hooseeya iyo cimri dhererka adeegga. Tayo wanaagsan, heerka guuldarrada hoose iyo cimriga dheer. Hawlgal fudud iyo hawlgal lagu kalsoonaan karo. Hawlgalka, hagaajinta, badbaadinta walwalka iyo shaqada-savin ...
Automatic Bag Granule Particle Grain Packer Packing Machine Hotel Hotel Sugar Salt Granules Coffee Machine Baakadaha OEM ODM La Heli Karo
Warshadda Tooska ah ee Iibka Baaraha Wershadaha iyo Mashiinka Miisaanka Dhammaan Mashiinnada Dhan oo lagu Sameeyay Shiinaha
Waxaa lagu dabaqaa caag, kiimiko, dawooyin, dhar, baahiyaha maalinlaha ah iyo warshado kale.
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Hawada kulul ee Wareejisa Qalajiyaha Warshadaha ee Qalajiyaha Mashiinka Qallajiya Mashiinka Cuntada
Hawada kulul ee Wareejisa Qalajiyaha Warshadaha Cunto -qallajiye Mashiinka Cunto -qallajiye Qallajintu waxay qaadataa naqshada marin -haweedka bidix iyo midig, wareegga hawo kulul ee 3600, iyo nashqadda derbiga marawaxadaha labada dhinac, si loo hubiyo in gaadhigu uu dhex mari karo lakabyada sare iyo hoose , mana jirto xagal dhintay. Qaybta dhexe waxay hubisaa jihada dabaysha, ma dhaafto dabaysha, maaddada si siman ayaa loo kululeeyaa, tayadana waa la dammaanad qaadayaa. Qolka qalajinta wuxuu ka samaysan yahay dahaarka polyurethane, iyo t ...
Iibka Tooska ah ee Warshadda oo La Habayn Karo Warshadda Dhaqaalaha Badankeeda Tooska ah Iibinta Xawaaraha Sare ee Biyo -La'aanta Weight Weight Checking Machine Miisaanka Diidmada Mashiinka Mashiinka Qaadista Ku Haboon Ogaanshaha Miisaanka & Kala -soocidda
Iibinta Tooska ah ee Warshadda oo La Habayn Karo Mashiinka Kala -soocidda Miisaanka Dhaqaalaha Badankiisa Ku Haboon Ogaanshaha Miisaanka & Noocyada Kala -soocidda daaweyn biyuhu ka buuxaan cell Unugga dhijitaalka dhijitaalka ah oo aad u sarreeya, wuxuu qaataa farsamaynta shaandhaynta dhijitaalka ah ee xawaaraha sare leh iyo shaqada raadraaca eber ee otomaatiga ah tafatirka alaabta fudud iyo kaydinta ● R ...
Warshadda Tooska ah Iibinta Xawaaraha Sare ee Biyo -la'aanta ah Weelka Miisaanka Hubinta Mashiinka Mashiinka Diidmada Miisaanka Diidmada & Kala -soocidda
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Mashiinka Kala -soocidda Miisaaniyadda Dhaqaale ee ugu badan oo laga sameeyay Shiinaha oo ku habboon Ogaanshaha Miisaanka & Noocyada Kala -soocidda: 1. Qaab -dhismeed bir -bir ah oo la xoojiyay; wuxuu buuxiyaa shuruudaha nadaafadda ee soosaarka cuntada iyo dawada 2. Isticmaalka dareemayaal sax ah; teknolojiyadda farsamaynta dhijitaalka dhijitaalka ah ee xawaaraha sare leh 3. Miisaanka firfircoon farsamada magdhow otomaatig ah; dhibic eber ah oo si toos ah loola socdo 4. 100 hore u -soo -saarka; tafatirka badeecada fudud iyo kaydinta 5. Beddelidda badeecadda degdegga ah iyo is-barashada f ...
123456 Xiga> >> Bogga 1 /43